Iinethiwekhi zeWi-Fi, fumana iipaswedi zenethiwekhi ezigciniweyo | Ubunlog
Iinethiwekhi zeWi-Fi, fumana iipaswedi zenethiwekhi ezigciniweyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esinokuyibona ngayo iphasiwedi yeenethiwekhi zeWiFi esidibanisa kuyo ngaxa lithile. Xa abasebenzisi benxibelelana nenethiwekhi engenazingcingo okokuqala ngqa, iphasiwedi iya kugcinwa kwikhompyuter yethu Ubuntu. Ngesi sizathu, akukho mfuneko yokuchwetheza iphasiwedi ngalo lonke ixesha siphinda sixhuma inethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi.
Njengoko ixesha lihamba, kwaye xa sifuna ukongeza isixhobo esitsha kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi, sisenokungasayikhumbuli iphasiwedi eyimfuneko. Ukuba uzifumana ukule meko, abasebenzisi be-Ubuntu (kunye nezinye iinkqubo zeGnu / Linuxsiya kuba nakho fumana kwi-terminal amagama okugqitha othungelwano lweWi-Fi apho besifudula sixhuma khona. Nathi sinako ukwenjenjalo jonga kwindawo yemizobo kwaye ngendlela elula ipassword yezi nethiwekhi esidibana kuzo ngaxa lithile.
1 Fumana igama eligqithisiweyo leenethiwekhi ze-Wi-Fi oqhagamshele kuzo noBuntu
1.1 Ukusuka kwisiphelo
1.2 Ukusuka kuMlawuli weNethiwekhi (i-GUI)
Fumana igama eligqithisiweyo leenethiwekhi ze-Wi-Fi oqhagamshele kuzo noBuntu
Njengoko benditshilo, ku-Ubuntu sinokufumana ipaswedi yenethiwekhi ye-wifi egcinwe kulayini wokuyalela okanye kwindawo yemizobo. Amanyathelo alandelayo ndizamile kwi-Ubuntu 20.04 LTS desktop (GNOME)Nangona kunjalo, la manyathelo anokufana kolunye ulwabiwo.
Ubuntu kunye nokuhluka kwayo, Iifayile zoqwalaselo lwenethiwekhi ezingenazingcingo zigcinwa kulawulo / njl /InethiwekhiManager/ Unxibelelwano lwenkqubo /. Ukuba sivula i-terminal (Ctrl + Alt + T) siya kuba nakho ukujonga iifayile zoqwalaselo zenethiwekhi ze-Wi-Fi esiqhagamshela kuzo kwikhompyuter yethu:
Njengoko ubona kule skrini ingentla, ndineefayile zoqwalaselo zenethiwekhi ezi-2 ezigcinwe kwinkqubo yam Ubuntu 20.04. Kule fayile siza kufumana iinkcukacha ezahlukeneyo zenethiwekhi nganye njenge-wifi id, i-SSID, indlela yokuqinisekisa, ipaswedi ye-wifi, njl. Ukubonisana nenye yezi fayile, kuya kufuneka sisebenzise lo myalelo cat okanye umhleli wombhalo ukubona iphasiwedi yenethiwekhi esithandayo.
Kulo mzekelo ndiza kubona iinkcukacha zenethiwekhi ye-wifi "dlink.nmconnection”Usebenzisa i-terminal (Ctrl + Alt + T) umyalelo:
Kwiskrini amaxabiso awahlukeneyo aya kuvela, phakathi kwawo siza kufumana I-PSK, Leliphi igama eligqithisiweyo lenethiwekhi ye-wifi. Kwabo bazibuza ukuba yintoni le, PSK (isitshixo ekwabelwana ngaso ngaphambili) yindlela yokuqinisekisa abathengi. Isebenzisa umtya onamanani angama-64 hexadecimal, okanye njengegama lokugqithisa lama-8 ukuya kuma-63 abalinganiswa be-ASCII ukwenza amaqhosha okubhala
Enye indlela yokujonga iphasiwedi kukusebenzisa i-grep command. Ke sinokufumana igama eligqithisiweyo lothungelwano lwe-Wi-Fi, njengoko kubonisiwe koku kulandelayo:
Lo myalelo uza kubonisa ipaswedi yazo zonke iinethiwekhi ezingenazingcingo ezigciniweyo.
Enye indlela yokufumana amagama agqithisiweyo kukusebenzisa umahluko womyalelo wangaphambili Injani:
Ukuba asifuni ukubona amagama e I-SSID yeenethiwekhi zeWi-Fi kwaye ubone kuphela amagama okugqithaKuya kufuneka ukongeze kumyalelo wangaphambili -h ukhetho:
Sebenzisa i -h ukhetho inokuba yingxaki ukuba sinenethiwekhi engaphezulu kwesinye egciniweyo. Xa usebenzisa olu khetho ngekhe sazi ukuba yeyiphi inethiwekhi eligqithisiweyonjengoko i-SSID ingaboniswanga.
Ukusuka kuMlawuli weNethiwekhi (i-GUI)
Ukuba ufuna jonga kuphela ipaswedi yothungelwano lweWi-Fi owawukade uqhagamshele kuyo Kwaye ukhetha ukusebenzisa imeko yemizobo endaweni yokusebenzisa i-terminal, kuya kufuneka ucofe kwi inethiwekhi icon ibekwe kwipaneli ephezulu yedesktop. Apho imenyu ehlayo iya kuvela. Ukuba senza njalo Cofa kwi-wifi ukhetho, enye imenyu iya kubonakala. Apha siza kufumana ukhetho 'Ukuseta iWi-Fi', ekuya kufuneka ucofe kuyo.
Kwiwindow eya kuvula siza kubona uluhlu lwenethiwekhi ezikhoyo ngoku. Apho sinako Cofa kwi icon "Useto" ukuba siza kubona ecaleni kweenethiwekhi ze-Wi-Fi apho sinokuthi sidibanise ngaxa lithile.
Ngoku iwindow yoqwalaselo yenethiwekhi ekhethiweyo yeWi-Fi iya kuvulwa. Kwi ithebhu 'Ukhuseleko', Siza kubona iphasiwedi ene-asterisks. Ukutyhila igama eligqithisiweyo, kuya kubakho okuninzi ukucofa kwibhokisi yokukhangela 'Veza ipasigama'.
Ezi ndlela zimbini zilula zokujonga iiphasiwedi zenethiwekhi ze-Wi-Fi esixhuma kuzo. Yintoni egqithisile Singafumana izixhobo ezininzi zokufumana kwakhona iphasiwedi kwiKali Linux. Akukho sizathu sokufaka i-Kali Linux, kufuneka nje faka izixhobo ezikhoyo kwinkqubo yethu Ubuntu kwaye usebenzise izixhobo zokubuyisela iphasiwedi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Iinethiwekhi zeWi-Fi, fumana iipaswedi zenethiwekhi ezigciniweyo
KwiGoogle Chrome baya kuqala ukubhloka iintlobo ezithile zeentengiso